Rongedza shangu dzako wonanga kuSandals - muCaribbean
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Resorts » Rongedza shangu dzako wonanga kuSandals - muCaribbean
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Jamaica Nhau • Caribbean • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Nhau Dzakanaka • nhau • Kuvakazve • Resorts • Vanodanana Michato Honeymoons • Shopping • ushanyi • Travel Deals | Matipi Ekufamba • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Trending Now • Akasiyana Nhau
Tungamira kuCaribbean uye ugare muSandals yakasarudzika nzvimbo yekutandarira iyo iri zvese inosanganisa iwe ungangoda kurongedza zvakaringana neshangu dzako.
Sezvo vafambi vachiita zvirongwa zvekubuda kunze kunopenya zuva, maCaribbean anobva angouya mupfungwa. Nemhepo inodziya inotonhora uye yakajeka mvura yegungwa, zviwi zvakaita seJamaica, Bahamas, Antigua & Barbuda, uye nezvimwe zvinopa izvo izvo muviri, pfungwa, uye mweya zvave zvichishuvira. Uye kuita kuti kuenda kutonyanya kuve nyore, maSandals Resorts anoita kuti zvinyanye kukwezva rongedza shangu dzako nezvipo izvo zvakanyanyisa kunaka kupotsa.
1 husiku husina mukana muzvikamu zvemakamuri akasarudzwa
Kusvika pamadhora 1000 ekubheja kiredhiti
Kusvika pamakumi matanhatu neshanu pamakumi mapfumbamwe emitero
Uye neSandals, iko kugara kuri kwese-kunosanganisa, saka hapana chikonzero chekushushikana nezvekufambisa kuenda nekubva kunzvimbo yekutandarira, yekudyira, kana zvekunakidzwa, nekuti zvese zvakachengetwa. Kubva panguva iyo vashanyi vanosvika paSandals airport lounges, ivo vanonzwa vakachengeteka uye vachinakidzwa nekunetseka-vasina zororo.
Sechikamu cheiyo shanu-nyeredzi yakasarudzika ruzivo, vaSandals vashanyi havana kumbosiyiwa kuti vazvidzivirire pachavo munhandare dzakazara. Muenzi wese anopiwa mukana wekuvata yega yakavharirwa maSandals nemaBeach vashanyi chete. Paanopinda, vashanyi vachapihwa dhopu remaoko sanitizer, yekuvharidzira mask uye magirovhosi, uye chinwiwa chinotonhorera munzvimbo dzakanaka.
Shangu dzinongoshandisa zvakavanzika kuendesa kune vese vashanyi uye zvakadzora huwandu hwevashanyi vanotakurwa mumhando dzese dzemotokari kuve nechokwadi chakakodzera magariro. Uye zvakare, mutyairi wese achange akapfeka chifukidzo uye magirovhosi uye achapihwa sanitizer yekushandisa nemuenzi wega wega. Mota dzinozogadziriswazve mushure merwendo rwese.
Kuchengetedza Kuchengetedza Kutarisa Pakutarisa-Mu:
Tembiricha yevaenzi ichaongororwa pavanosvika kunzvimbo yekutandarira senzira yekuchengetedza. Tembiricha inopfuura 99.5F / 37.5C ​​inozotariswa iri kure. Kuwedzera kwekushisa kutarisa kunogona kuitwa pachikumbiro chemushanyi kana kuraira kwemukoti ari pabasa kwenguva yekugara.
Maitiro Ekutsemura Panyama
Sandals yagara iri yezve kudanana, uye zvinoreva kuti vashanyi vane nzvimbo yekunzwa senge ivo vaviri, vari voga pamwechete. Mazhinji emaresitorendi akavhurika uye anounza mhepo nyowani kubva kugungwa. Uye ikozvino nzira nyowani dzekukurudzira vashanyi vedu kuti vagare zvakachengeteka magariro evanhu akaunzwa vachiri kupa zororo rekuzorora.
Yakazara-Service Medical Zviteshi
Sandals maresitorendi agara akagadzirwa nezvizere-zvipatara zvipatara zvinoshanda zuva nezuva nemukoti akanyoreswa uye 24/7 vanoshevedza vashandi vekurapa, asi ivo vakavandudza zvivakwa izvi kuti zvive nemidziyo yakakodzera uye zvekushandisa zvinodiwa kugadzirisa protocol nyowani.
Iyo Platinum Protocol yeUtsanana
Iyo Sandals Platinum Protocol yeUtsanana inosanganisira inowedzerwa hutano uye hunhu hunodiwa munzvimbo dzese dzekubata kunzvimbo dzese dzekushanyira, kusanganisira nzvimbo dzakajairika, maresitorendi ese nemakicheni, mabhawa, makamuri evashanyi, zviitiko, nzvimbo dzekusimbisa muviri, spas, uye inosanganisira zvese kumashure-kwe-zviitiko mashandiro. Sandals Gumi nesere Kubata Pfungwa Kuita ndiko kuongorora kwakadzama kwenzvimbo dzese dzekushanya kwevashanyi munzvimbo dzayo dzese dzinoverengera zvichigonesa kutarisa patsika dzakabatanidzwa dzehutsanana pamatanho gumi nemasere ekubata mumasuti nemumba yekugezera nekutevedzera katatu-cheki yekuchenesa system.
Saka, bhuku nechivimbo, tora chibvumirano, uye nanga kuparadhiso… uye rangarira kurongedza hwashu dzako!